Wax walba diidnaye maxaynu dooni?
Posted to the Web May 19, 2002
Anigoo warka nuxurkiisa horay ka abaarayo soomaliyeey warkeenu ma hadwalba wixii maqan baa wanaagsan miyaa.
Goormaan ciladeena qiraneeynaa oo nafteena markaas runta aanu usheegi mise waligeen meel walboon joogno nafta madadaalada beenta ayaanu ku wadeeynaa, oo goor walbana dembiga cidkale aan dhusha ka saaraa.
Markaan wax badan u fiirsaday waxaan ogaaday ruuxii isku dayaa in uu tiisa shaqsiyanka ah sida danaha caruurtiisa iyo xaaskiisana kumashquulo sidii mustaqbal uu ugu sameeyo, cudur badanaa ka baxo oo nacayb iyo qod qodida walaalkiisa soomaali wuu ilooba dhibta loogeeystana waa uu ka xumaadaa, waxaana halkaas kas ka baxda oraahdii ahayd ruuxa camal la aanta ah xaakin buu isu badalaa.
Hadaba ninka camalka kadhigtay in uu qoraal ku dagaalamo oo walaalkiis caaydiisa colaadiisa iyo fogeeyn tiisa ku daalayo waxaan leeyahay horumar arintaas malahan horay waxii looga gun keeniwaayayna waxba ku keeni meeysid, naftaada waanso waligaana soomaali baad tahay cadawga necebna waaku neceb yahay kan jecelna waa ku jecel yahay.
Aakhiradaada toosi qabrigana kaligaa baa lagugu xarayn soomaali kulama gelayo xasuusnoow,xaalada hada lagu jirana walaalaha waxba hakala fogeyn.